Ogaden News Agency (ONA) – Gudiga fulinta Jaaliyada Ogadeniya ee Victoria (JOVIC) oo kulan muhiim ah ku qabsaday xarunta Melbourne.
Gudiga fulinta Jaaliyada Ogadeniya ee Victoria (JOVIC) oo kulan muhiim ah ku qabsaday xarunta Melbourne.
Gudiga Fulinta jaaliyadda Ogadenya ee Victoria Melbourne ayaa isugu yimid kulan shaqo.Kulankaas oo uu daadihinyaya Gudoomiyaha JOVIC ee Melbourne Mudane Hassan Ahmed Nuur ayaa lagaga hadlay qodobo ay kamid ahaayeen:
1) Dhameystirka gudiga jaaliyada.
2) Dar dar galinta hawlaha jaaliyada iyo garab istaaga halganka ka socdo gudaha Ogadeniya.
3) iyo wacyi galinta ama abaabulka bulshada Ogadenia ee ku dhaqan Melbourne.
Kulanka waxaa warbixin dheer ka soo jeediyay mudane Hikam sheikh taas oo ku saabsan xaalada kala guur ka ah ee uu halgankeenu maraayo gudo iyo dibad ba wuxuuna xubnaha ku booriyay in dadaalka balaadhan ee ay wadaan sii laban laabaan.
Gudiga jaaliyada Ogadenia ee Magaalada Melbourne ayaa bilahan dambe sidii loo baahnaa uga wado dhamaan gobalkan Victoria ee Australia dar dar cusub iyo xoojinta howlaha loo igmaday.Ugu dambayntii wuxuu kulanku kusoo idlaaday si heersare iyo is afgarasho ku dheehan tahay leh.